विरोध गर्न के हामीले माइक भाँचेर हान्नुपर्दथ्यो ? एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल - Pahilo News
विरोध गर्न के हामीले माइक भाँचेर हान्नुपर्दथ्यो ? एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल
० संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल नै गर्न दिँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो, आखिर टेबुल भएरै छाड्यो त ?
– त्यसभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो ठाँउमा उभिएर विरोध जनायौं । संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका विपक्षीहरु उभिनु भनेको विरोधको अवस्था हो र त्यो विरोधलाई अवरोध मानिन्छ । यो अवरोधको अवस्थामा संसद् अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर यो भन्दा अगाडि सभामुखज्यूले दिनैपिच्छे रुलिङ गर्नुभएको हामी सबैका सामु छर्लङ नै छ । आइतबार पनि हामीले त्यहाँ अवरोध गर्दा हानमार गर्ने कुरा स्वभाविक रुपमा सोचेका थिएनौं । हाम्रो आन्दोलन भनेको हामीले अवरोधको स्थितिलाई निरन्तरता दिने भन्ने मात्र थियो । आइतबार पनि त्यो कार्यसुची आइसकेपछि विरोध ग¥यौं । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट त्यो दवावको वावजुद सभामुखज्यूले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभयो । हामीले त्यसविरुद्ध नारा लगायौं, हल्ला ग¥यौं । विगतको भन्दा हाम्रो विरोध अझ एक कदम अगाडि गएर गरिएको थियो । त्यो विरोधको वावजुद गृहमन्त्रीको कार्यसूची प्रस्तुत गर्न गएका कानुनमन्त्री रोस्टममा माथि नै बसिरहने, एउटा विषय सकिएर अर्को महाअभियोगको विषय हुँदा पनि मन्त्री माथि नै बसिरहने खालको जुन प्रयत्न भयो, त्यो एकदमै गलत खालको नजिर भयो ।
हामीले हाम्रो ठाँउबाट संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र विपक्षीहरुको अवरोध र असहमतिका बावजुद अगाडि जानु हुँदैनथ्यो । त्यो प्रचलन राम्रो प्रचलन थिएन । यो सरकारले त्यती गरेर ठुलै युद्ध जितेको छु, महान उपलव्धी प्राप्त भयो भन्ने मान्ने हो भने त्यो गलत नजिर हो । संसदीय व्यवस्था भित्रको आन्दोलन भनेको तोडफोड गर्ने, कुर्सी भाँच्ने, माइक निकालेर फ्याँक्ने वा माथी पोडियममा जान खोज्ने जस्ता कुराहरुलाई आन्दोलन भनेर बुझियो भने त्यो आन्दोलनको विकृत रुप मात्र हुनेछ । आइतबार पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट अवरोधलाई संगठित गरेका छौं, व्यवस्थित गरेका छौं । र त्यो भावना प्रति हामी अहिले पनि दृढ छौं ।
० उक्त विधयेक टेबुल हुँदै गर्दा यहाँहरुले मन्त्रीलाई रोक्न चाहनु भएन वा रोक्न सक्नुभएन वा झुक्कियो वा झुक्क्याइयो ? साथै सांसदहरु रोष्टम घेर्न अघि बढ्दा आफ्नै शिर्ष नेताहरुले रोक्नुभएको भनिएको छ ?
–व्यत्तिहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी बाहिर लान खोज्नुहुन्छ त्यो मान्छेहरुका आआफ्ना कुरा हुन् । हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठक राखेर बैठकमा पनि निर्वाचनसंग सम्वन्धीत र महाअभियोगका विषय अघि बढ्दा चल्न दिने र संविधान संशोधन सम्वन्धी विषय आँउदा अवरोधको स्थितिलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने तयारी गरेका थियौं । द्धन्द निम्त्याउने, मुठभेड निम्त्याउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन भनेर स्पष्ट पारेका थियौं । सत्तापक्ष नै त्यसमा गए अलग कुरा हो भन्ने दलका नेताको भनाई थियो । बिहान १२ बजेको बैठकमै अध्यक्षले हाम्रो अवरोध जारी छ भनेर त्यो निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो भनेपछि त्यसलाई नेताहरुले समर्थन गरेको भन्नु आत्मतुष्टी बाहेक केही होइन । हाम्रो दलभित्र यसबारेमा कुनै समस्या पनि छैन र हामीले हाम्रा सदस्यहरुलाई त्यो ओरिएन्टेशन सुरुमै दिइसकेका थियौं ।
० तर यो त कुटेजस्तो गर म रोएँजस्तो गर्छु भने झै शिर्ष नेताहरुकै मौन समर्थनमा भएको भन्ने प्रचार शुरु भएको छ नि ?
–दलका नेताहरुका बीचमा छलफल हुने कुरा त स्वभाविकै भैहाल्यो । सभामुखको पहलमा ५ दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक थियो । त्यसमा प्रमुख सचेतकहरु पनि आमन्त्रीत गरिएका थियौं । त्यो बैठकपछि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको पनि अलग्गै बैठक थियो । त्यो पछि नेपाली काँग्रेसका सभापति लगायत हाम्राँ पनि अरु धेरै नेताहरुका बीचमा पनि बैठक छलफल भयो । तर छलफल र बैठकका कुरा भनेको सरकार त्यसलाई अघि बढाउने कुराबाट पछि हट्न नसक्ने र हामी हाम्रो अवरोधको स्थितिबाट अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिको आ आफ्ना अडानहरुमा नै कायम रहेका थियौं । आ आफ्ना अडानमा रहँदा हामीले विगतका आन्दोलन भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर हामी आफ्ना ठाँउबाट हामीले त्यसको प्रतिवाद ग¥यौं । सभामुखले गर्नुभएको त्यो टेबुल गर्न दिने प्रस्तावको विरुद्ध हामीले होहल्ला ग-यौं । नारा पनि लगायौं । जबकी यसअघि हामी आफ्नो ठाँउमा उभिने मात्रै गरेका थियौं । यसमा कतिपय व्यत्तिहरुलाई र दलहरुलाई के लाग्छ त्यो अलग कुरा हो । तर हामीले त्यसै दिन विहान एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी गठवन्धनका नौ दलका शिर्ष नेताबीच बसेको बैठकबाट पनि हामीले संभावित अवरोधको स्थितिलाई कहाँ सम्म लान्छौं, जर्वजस्तीको कुरामा हामी कुन ठाँउमा पुग्छौं, त्यो भन्दा पछिका सैद्धान्तीक छलफलमा हामी कहाँसम्म पुग्छौं भन्ने सबै खालका कुराहरुमा सहमति गरेरै एउटा निर्णय गरेरै अगाडि बढेका छौं । त्यसले गर्दा यसलाई पृथक ढंगले बुझ्नु जरुरी छैन । किनकी हामी सहकार्यमा पनि छौं, राष्ट्रको हित विपरीत ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यो संसदबाट कुनै हालतमा पास हुन नदिने प्रतिवद्धतामा छौं । यो संगसंगै आउने हरेक चुनौतिहरुको सामना गर्दै यो संशोधन प्रस्तावलाई हर हालतमा विफल बनाइ छाड्छौं ।
० यो प्रस्तावलाई परास्त गर्न कसरी लाग्नुहुन्छ ? सांसदहरुको खरिद विक्रीको खेल का खतरा पनि छन् भनिन्छ ?
–सबैभन्दा ठूलो कुरो राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । त्यसका लागि जनताहरुले जुन खालको आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, दलहरुका बीचमा जुन खालको सहमतिको वातावरण विकास भइराखेको छ, स्वयम् माननीयहरु पनि विभिन्न खालका घटनाक्रमहरुमा भए गरेका कामहरुको आलोचनाबाट परिस्कृत हुँदै जानुभएको छ । हामीले जसरी राष्ट्रहितमा लागि संविधान जारी ग-यौं त्यसको कार्यान्वयनका लागि इमान्दार रहनुपर्छ, हाम्रा कतिपय आन्तरिक मामला छन् भने त्यसलाई आन्तरिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ, बाह्या निर्देशकहरुको योजनामा हामी उफ्रिने वा सञ्चालित हुने खालको कुरा गर्दा मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ र त्यो मुठभेड र दुर्घटनाबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा जब माननीय सदस्यहरुले बुझ्नु भएको छ, त्यसको आधारमा विभिन्न खालका समस्याहरुको वावजुद उहाँहरु जसरी उभिनु भएको छ, त्यही बुझाइले नै सांसदहरुलाई खरीद विक्री वा विभिन्न खालका झुट्टा आश्वासन र प्रलोभनहरु भन्दा हामी संगठित भएको मोर्चाभित्रका सांसदहरु यी सबै प्रलोभनहरुलाई छिचोलेरै अगाडि बढ्ने योग्यता राख्नुहुन्छ । सरकारको वा सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्देशित तत्वहरुको विभिन्न खालका योजनाहरुको प्रभावबाट यो आन्दोलनलाई निर्णयक रुपमा क्षती पुग्दैन भन्ने विश्वास मैले लिन्छु ।
० दुई पक्षबीचको द्धन्दको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव टेवल हुनुले राजनीतिक डेडलक हटाउने काम गरेको छ, त्यसैले जे भयो ठिकै भयो भन्ने हिसाबले पनि मतहरु आइरहेको छ नी ?
–ती अनुमान र चर्चा आ आफ्नै ढंगबाट आएका होलान् । लोकतन्त्रमा अनुमान गर्ने र परिकल्पना गर्ने कुराका लागि सबै स्वतन्त्र नै हुन्छन् । हिजो पनि हाम्रो विरोधका वावजुद आएको हो र यो संविधान संशोधनसंग सम्वन्धीत विषय भोली छलफलको लागि अथवा प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि त्यसले विभिन्न खालका घुम्तीहरु पार गर्नुपर्छ । यो विषय आएको बेला संसदमा हाम्रो अवरोधको स्थिति कायमै छ । हिजो विभिन्न कारणले गर्दा सरकारले जर्वजस्ती ग¥यो । टेबुल ग¥यो । अब टेबुल गरिहाल्यो, यो प्रक्रियामा गयो, प्रक्रियामा पु¥याउ, भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गछौं र भोलीका दिनमा पनि यो विषयको पुर्णताका निम्ति आउने हरेक चरण र कार्यविधिहरुमा हामी अवरोधका रुपमा पेश हुन्छौं । त्यसलाई विसाएका छैनौं ।
० विरोधका वावजुद पनि पारित भयो भने के हुन्छ राजनीति ?
– यो पारित हुने संभावना नै छैन र त्यसरी त्यो परिकल्पना गर्ने खालको कुराले कसैलाई सन्तुष्टी दिएको छ भने पनि त्यो क्षणिक कुरा हो ।
० निर्वाचन गर्ने शर्तमा यो विधयेक पास भएर अघि बढ्ने कुराको संभावना छ पनि भन्छन् नी ?
–यो संविधान संशोधन विद्येयक नै निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रको एउटा औजारका रुपमा आएको हो । त्यसैले यी दुईबीच कुनै साइनो सम्वन्ध छैन ।
० एकैदिन संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल हुनु र लोकमान कार्की अदालतको आदेशले बर्खास्ती हुनुमा कुनै संयोग वा तालमेल केही छ ?
–यसमा कुनै तालमेल छैन । पहिले हामीले १४ गते वक्ताहरुको क्रम अलिकति बाँकी रहेकाले १६ गते त्यसलाई पठाउने भन्ने निधो गरेका थियौं । सर्वोच्चले त्यही १४ गते नै सिमाको हरेरफेर र संविधान संशोधन सम्वन्धित विषयमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु पर्ने÷नपर्ने भनेर सरकारलाई समेत बोलाएको थियो । दिउँसो अदालतमा मुद्दा पर्ने र मध्यराती अहिलेको सत्ता गठवन्धनले राष्ट्रहित विपरीतका कुराहरु समावेश गरेर प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । त्यो अवरोधको स्थितिको कारणले त्यो विषय पनि यसमा परेकाले पछिल्लो दिनमा केही विलम्ब भएको थियो । हामीले निर्वाचनसंग सम्वन्धीत विधयेकह्रु र महअभियोग सम्वन्धी कुरामा प्रष्ट बनाइसकेका थियौं त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको विषयमा मात्र आन्दोलन गर्ने र बाँकी विषयहरुमा संसद चल्न दिने भनेर दलको बैठकमै संस्थागत ढंगले निर्णय गरिएको थियो । यही कारण हिजो यो विषय अगाडि बढेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सन्दर्भमा अगुवाई गरेर लागेको एमालले यो वीचमा किन ढिला ग¥यो भनेर एमालेका विरुद्ध अलिकति पनि तुस राख्न सकिन्छ की, एकछिन भएपनि अलिकति अफवाह फैलाउन सकिन्छ कि भनेर जुन जुन शक्तिहरुले त्यसलाई प्रचार गरेका थिए, ती मिथ्या रहेछन् भन्ने फेरि पुष्टी भएको छ ।
० विद्यमान परिस्थितिमा निर्वाचन कहिलेसम्म होला त ?
मुलुकमा अब संविधानको कार्यान्वयन गरेर तिनै तहको निर्वाचन आँउदो मंसीर भित्र गर्ने खालको कुरामा नै राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यही वातावराण् बनाउने कुरामा सबै राजनीतक शक्तिहरु र सिङगो राष्ट्र त्यसमा लाग्नुपर्छ ।